Siyaasadda Maanta |
Wafdi ka Socda Midowga Afrika ayaa shalay soo gaaray Muqdisho, kuwaasoo qiimeyn ku sameyn doona doorashada lagu wado inay Soomaaliya ka dhacdo Dhammaadka sannadkan 2016-ka. Xubnaha wafdigan oo ka kooban afar, ayaa waxay u kuur-geli doonaan sida loogu diyaar-garoobayo Doorashada dhacaysa bilaha August iyo September ee Sannadkaan iyo waxyaabaha u baahan in laga caawiyo Dowladda…
Kulan looga hadlayay siyaasadda qaran ee amniga oo magaalada Kismaayo uga socday dowladda Soomaaliya iyo Jubaland ayaa lasoo gabagabeeyay, ayadoo kulanka la isku afgartay in si wadajir ah la isaga kaashado arimaha nabadgelyada dalka. Kulankan oo u dhexeeyay wafdi ka koobnaa wasiirro iyo saraakiil ciidan oo uu hogaaminayay raysul wasaare kuxigeenka dalka Mudane Max’ed Cumar…
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke oo ka qeyb galaya shirka golaha guud ee Qaramada Midoobey ayaa waxaa uu xafiiskiisa New York ku booqday Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey Mr Ban Ki-moon. Ra’iisul Wasaaraha iyo Xoghayaha Guud ayaa ka wada hadlay horumarka ay Soomaaliya ka sameysay dhinacyo badan. Sidoo kale waxaa uu uga warbixiyay…